Mihabe ve ny fantsona? | Nutri Diet
ny fantsona Angamba izy ireo no iray amin'ireo sakafo maivana indrindra mahasalama azontsika amin'ny tolak'andro, na dia maro aza no mino fa manome tavy antsika izy ireo ary feno tavy tsy mahasoa antsika.
Ankoatry ny zava-misy, ny fantsom-pahasalamana dia salama ary lanin'ny saina iray afaka manampy antsika hanome fahafaham-po ny filan'ny nofo sy hifehy ny lanjantsika. Tary hiresaka bebe kokoa etsy ambany izahay.
Voan'ny tanamasoandro no lanin'ny maro ao Espaina, Tsy sakafo maivana sy mora fotsiny, fa ny ankamaroan'ny antoko izay atao ao dia mifandray amin'ny fanjifana fantsona, fialamboly ankafizin'izy ireo indrindra. Na izany aza, mety tsy mankasitraka azy ireo ny arabe toy ny akorandriaka hatrany amin'ny tany.
Us eto ambany hofakafakainay ny tombony azo, raha mampatavy antsika izy ireo, firy no azontsika alaina raha misakafo sy manao ahoana ny fampidirana azy ireo ao anaty lovia mba hahafahantsika mankafy azy ireo amin'ny manaikitra rehetra.
1 Tombony azo amin'ny fantsona
2 Mihabe ve ny fantsona?
2.1 Mianara mihinana azy ireo mba hahasoa azy ireo fa tsy hanatavy
Tombony azo amin'ny fantsona
Como todos los sakafo izay hitantsika eo amin'ny natiora, raha mihinana an'io sakafo be loatra io isika dia hampatavy antsika. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny mandray soa amin'ny fananana sy ny sanda ara-tsakafo rehetra ao, toy ny voan'ny tanamasoandro.
Ny fantsona dia masomboly manome kaloria sy vitamina betsaka amin'ny vatana, na izany aza, tsy mila mahita ireo kaloria ireo ho zavatra manimba isika, fa zavatra mahasoa.
Ahitana gamma-linolenic, karazana asidra matavy izay manampy antsika hitony sy hilamina.
Etsy ankilany, mihena izy ireo kolesterola sy haavon'ny triglyceride amin'ny ra noho ny tavy tsy masaka.
Manankarena izy ireo vy, phosphore, potassium, magnesium y soritry singa.
Mihetsika toa azy ireo izy ireo antioksida.
Misy vitamina B9, singa iray tena ilaina amin'ny sakafo mahavelona ny ankizy kely satria manampy azy ireo amin'ny fitomboany izany. Ho fanampin'izany, ity vitamina, fantatra amin'ny anarana hoe asidra folika ity, dia tena ilaina amin'ny dingana voalohany amin'ny fitondrana vohoka ny vehivavy ho an'ny fampandrosoana lavorary ny foetus.
Ny asidra matavy misy amin'ny voan'ny tanamasoandro, na ny monounsaturated toy ny polyunsaturated mahasoa azy ireo ho an'ny fahasalaman'ny fontsika.
Amporisihina izy ireo hihinana aorian'ny fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny mineraly rehetra omeny antsika, dia hahazo fampiononana ianao.
Ankoatra izany, vitamina E., dia hiandraikitra ny fampitomboana ny fahaizanao ara-batana sy hahatratraranao ny tanjonao isan'andro, na amin'ny andiam-panatanjahan-tena, an-tongotra na bisikileta hiasa.
Tena hampitombo ny anao izany Angovo.
Raha mandany azy ireo amin'ny fomba antonony isika ary miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja, dia tsy misy antony tokony hatahorana azy ireo, satria sakafo tena mahasoa izy ireo araka ny hitantsika teo aloha.
Ny paipa dia iray amin'ireo voanjo feno indrindra izay mety ho hitantsika, manasongadina azy ireo izahay vitamina E sy vitamina B9, ary ny marimarina kokoa, voa 25 tanam-boaramaso mirindra 150 kcal.
ireo ambioka Izy ireo dia azo jerena amin'ny endrika marobe, miaraka amin'ny hoditra misy tsiro, misy sira betsaka, nendasina, voahidy ary voatoto na voadidy sy endasina, ary mahazo karazana mamy mihitsy aza isika. Ny filamatra dia ny mandany azy ireo fomba voajanahary, namboarina tsy nisy sira ary tokony ‘nodiovina’, satria raha mividy azy ireo efa voahitsakitsaka isika dia lehibe kokoa ny fakampanahy hihinana azy ireo ary afaka mihinana fantsona be dia be isika nefa tsy fantatsika izany.
Mianara mihinana azy ireo mba hahasoa azy ireo fa tsy hanatavy
Tahaka ny zava-drehetra eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy takatsika sy fantatsika izay sakafo mety ho entina amintsika, amin'ity tranga ity, ny fantsona dia afaka ampidirina mora foana amin'ny andavan'andro antsika.
Ireto ny mety mety ho ao an-tsainao amin'ny fotoana hidiranao ao an-dakozia.
Ampio izy ireo salady.
manao Pan ny fantsona.
Como 'topping' amin'ny saosy na menaka.
Raiso izy ireo irery, voatono sy tsy nasiana sira.
manao ronono legioma ny fantsona ao an-trano.
Kosohy izy ireo ary ampio izy ireo ho toy ny matevina na zava-manitra amin'ny lovia rehetra.
Tsy voatery hihoatra ny vidiny ianao, noho izany dia manome soso-kevitra izahay tsy hihoatra ny 25 grama. Marina fa sakafo mamorona fiankinan-doha iray izany ary miankina amin'ny fotoana lanintsika azy ireo.
Raha ny tokony ho izy dia ento amin'ny tolak'andro na amin'ny mitataovovonana izy ireo. Amin'ny maha-sakafo kely mahasalama azy dia mampiala voly anay sy manandrana matsiro. Raha misafidy ny karazan-tsakafo masira ianao, dia mitovy ny sandan'ny kaloria, na izany aza, hampitombo ny fihenjanana sy ny tosidra izany amin'ny olona voan'ny fiakaran'ny tosidrà fahasarotana hafa.
Ny filamatra dia ny mandany azy ireo rehefa angatahan'ny vatana amintsika.Raha te hanova sy hihinana voankazo maina mahasalama ianao ary maniry karazana dia aza atao tsinontsinona ny fantsona ary aza matahotra ny hahazo lanja, satria ny fifehezana kely dia afaka manome fahafaham-po ny filanao ary tsy mila mihinana hafa ianao sakafo.
Tadiavo ireo karazana tianao indrindra, na dia andramo aza ny mihinana ireo fantsona izay avy amin'ny voly maharitra ary efa voatsabo amin'ny fanafody famonoana bibikely faran'izay kely azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Mihabe ve ny fantsona?